यी हुन् उच्च सेयर कारोबार हुने साताका पाँच कम्पनी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ २० print
साताभर समग्र नेप्से परिसूचक ११ अंकले घटे पनि केही कम्पनीको सेयर खरीदमा भने लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण रह्यो। स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक कारोबारका आधारमा यो साता अग्रस्थानमा रह्यो।
सो कम्पनीको १७ करोड ९२ लाखको सेयर खरिदबिक्री भयो। कम्पनीको मूल्य साताभर प्रतिकित्ता १० रुपैयाँले घटेर २१ सय ९० कायम भएको छ। चालु आवको नाफा तथा जगेडा कोषबाट बैंकले शत प्रतिशत बोनस दिएर पुँजी पुर्याउने भएकाले लगानीकर्ता आशावादी हुँदा कम्पनीको कारोबार उच्च भएको हो।
सिद्धार्थ बैंकको १५ करोड ३१ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता ५ सय ९० कायम भएको छ। १२ करोड ५३ लाखको कारोबार भएको हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कारोबारका आधारमा तेस्रो स्थानमा रह्यो ! हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले १ बराबर १ दशमलव ६ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्नेगरी धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा बसेको छ। बैंक अफ काठमाण्डु र प्रभु बैंकको ८–८ करोडभन्दा बढी रकमको सेयर कारोबार भई उत्कृष्ट पाँच कम्पनीभित्र पर्न सफल भए।
साताभर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५८ कम्पनीहरुको दुई अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भयो। कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५ दशमलव ८१ प्रतिशत बढी हो। यो साता पनि ४ दिन मात्रै कारोबार खुला भयो।
नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ११ अंकले घटेर अन्तिम दिन १६०४ अंकमा अडेको छ। जलविद्युत र उत्पादन समूह यो साता क्रमशः १४ र १९ अंकले बढे। वाणिज्य बैंक ११, विकास बै.क ५, वित्त ०. ९, होटल १६ बिमा ९ र अन्य समूह २७ अंकले घटेका छन्। सिभिल लघुवित्त, सोल्टी होटल, हिमालयन बैंकको बोनस तथा कैलाश विकास बैंकको हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४ ११:५०:४१
एनएमबि बैंकमा निःशुल्क आस्बा सेवा
एनएमबि बैंकले पनि आस्बा सेवा निशुल्क गरेको छ। आस्बा प्रणालीमार्फत सेयर भर्दा शुल्क नलाग्ने बैंकले जनाएको छ। धितोपत्र बोर्डले आस्बा सेवा दिँदा प्रतिफारम १ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेपनि एनएमबि बैंकसहित केहीले निशुल्क गराएका हुन्।
श्रम बैंक र रेमिट्यान्स शुल्कको छुट बजेटमा नपर्दा कामदार मर्कामा
नयाँ बजेटले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको समस्या समाधानको विषय भने समावेश हुन सकेन। खासगरी विगत तीन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको श्रम बैंक स्थापनाको लक्ष्यलाई यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश नै गरिएन।
साढे १० अंकले ओर्लियो नेप्से
साताको पहिलो दिन साढे १० अंकले नेप्से ओर्लिएको छ। कारोबार बन्द हुँदा १५ सय ९३ अंकमा नेप्से अडेको छ। १ सय ४१ कम्पनीको ५५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको छ।
वृद्ध भत्ता घर घरमै दिइने
बैंकमार्फत दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता आगामी आवदेखि घर घरमै वितरण गरिने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन टाढाको बैंकसम्म पुग्न अशक्त तथा वृद्धवृद्धाले ज्यादै सास्ती खेप्नुपरेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी सिन्धुपाल्चोक, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिङ तामाङले वृद्ध वृद्धाको सुविधाको लागि घर÷घरमै गएर वितरण गरिने बताए।
माहुलीको सेयर बाँडफाँड, १३ प्रतिशत आवेदकले मात्रै पाए
माहुली लघुवित्तको यसअघि खुलेको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) बाँडफाँड भएको छ। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच बिक्री प्रवन्धक सनराइज क्यापिटलले आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो।